Dandelion maTatoo uye zvazvinoreva | Kunyora
Susana godoy | | MaTatoo eMaruva uye Zvirimwa
Pasina kupokana, ndeimwe yematato anozivikanwa pakati pevasikana nevakadzi. Ndizvozvo, tinotaura nezvazvo dandelion nyora. Haisi nguva yekutanga yatinotaura mukati Kunyora yerudzi urwu rwematato kubvira gore rapfuura, mumwe wangu Maria Jose akatotiudza nezvematato eruva rino rakanaka uye rakapfava. Kunyangwe uye uye panguva iyoyo, isu takataura zvakanyanya nezve maonero pane ezvinoreva uye chiratidzo chine tattoo iyi.
Uye izvi ndizvo zvaticha taura nezvazvo muchinyorwa chino, isu tichatsanangura iyo yekufananidzira uye zvinoreva kuti iyo dandelion nyora pamwe nezvikonzero zvekuti munhu anogona kutora iyi tattoo paganda rake. Kune rimwe divi, isu tichazopawo mamwe mazano kuti titore iyo yekutanga uye yakasiyana tattoo.
1 Zvinorevei dandelion nyora zvinorevei?
2 Zvinoreva zveMweya
3 Dandelion Tattoo Dhizaini
4 Dandelion tattoo ine mavara
5 Ndekupi kwekutora iyo dandelion tattoo
6 Dandelion Tattoo Mutengo
7 Mifananidzo yeDandelion Tattoos
Zvinorevei dandelion nyora zvinorevei?
Zvino kana iwe wakatsunga (kana kutsunga) ku nyora dandelionndinofungidzira iwe ungade kuziva izvo tattoo iyi inomiririra uye zvinoreva. Iyo dandelion ruva ndechimwe chezvirimwa zvakajairika zvinogona kuve, inokura muhuwandu uye zviripo mune chero dunhu repasi. Uye ndezvekuti, kunyangwe zvingaite senge tiri kutaura nezve tattoo inoratidzira kuwanda, hapana chiri kumberi kubva kuchokwadi.
Hunyoro hwahwo uye kuti hunofambidzana nevana nevechidiki (isu tese takapururudza mamwe madandelion sevana) inoita aya maTattoo anofananidzira kusava nemhosva, kuchena uye kufungidzira. Kunyangwe izvi, isu hatigone kusiyira parutivi mukana wekuti vanhu vazhinji vanoisa tattoo ruva iri kumiririra imwe nguva yakakosha muhupenyu hwavo kana ndangariro dzatisingade kufamba kwenguva kuti dzive grey uye zvisina kujeka.
Sezvo isu zvataurwa zvakanaka, kusava nemhosva ndeimwe yeiyo zvinoreva zvakanyanya izvo zvinoratidzwa mune tattoo yakadai. Asi isu tinogona kuramba tichienda kumberi. Icho chinoreva chemweya che dandelion maTattoo anobatanidza isu pari zvino neakare. Hongu, zvinogona kutaridza kunge zvisina kujairika asi hazvisi. Iyi inzira yekusakanganwa ndangariro huru dzehudiki, dzekugara uchisangana nadzo uye nekurarama nguva dzinofadza, kana zvirinani, pasina kunetsekana kukuru. Mashiripiti uye zvishuwo zvakabatanawo nechiratidzo chayo. Kunyangwe chirimwa icho pachacho chave kutorwa semashiripiti mune imwe nguva, pamberi pechinoreva icho chakange chisiri kuzosiiwa kumashure.
MuchiKirisitu zvakanzi chirimwa ichi chakabatanidzwa nerudo rwaJesu. Zvakafanana nerombo rakanaka iro rinogara richiperekedza iwe. Kubva pane izvo zvatinogona kutaura kuti chazova chiratidzo chakanaka uye panguva imwechete ichienderana nekupona, kupora uye kusimba.
Dandelion Tattoo Dhizaini
Zvakanakisa kuti iwe utarise zvakakwana dandelion tattoo gallery kuti une pazasi. Ehezve, kana zvasvika pakutaura nezve dhizaini, tinoona kuti pane imwe inokunda vamwe vese, zvirinani mukuzivikanwa uye huwandu hwenguva dzakatemwa Uye iri dandelion iro rakaputirwa kunze uye maruva ayo ashanduka kuita shiri diki.
Kunyangwe uye ndichifunga kuti iyi tatoo "yakawonekwawo", pachangu ndingasarudza chimwe chakasiyana, ikozvino, zvatichazotaura nezvazvo ikozvino kufunga kwepamoyo pane chero chinhu chipi zvacho. Kune yangu chikamu, uye kana ndaifanirwa kupa maonero angu kune mumwe munhu anoda kuita dandelion tattoo, ini ndaizovataurira kuti vasarudze imwe nzira, dhizaini-yakaita dhizaini inobata iyo isingabvumirwe inogona kunge yakanaka kwazvo. Uye saka isu tinobva kure neyakajairika dandelion neboka reshiri.
Dandelion tattoo ine mavara
Sezvo nemamwe marudzi emaTatoo, isu tinogona zvakare kunakidzwa nemisiyano mizhinji mune ino. Imwe yadzo kuona kuti iyo Dandelion tattoo ine tsamba inotora nzvimbo yekutanga. Zvichida nekuti nekuwedzera pakuve nezviratidzo zvese zvatataura, tinowedzera chirevo chitsva kwazviri. Tine chikwereti ichi kune mavara anozoita mamwe mazwi kana zvirevo.
Chinhu chakajairika kuona mazwi ekurudziro kana aya mazwi akanaka anogara achitiyeuchidza kuti tinofanira kuramba tichirwa zuva nezuva. Ehezve, zvakanakisa kusarudza zvipfupi mitsara kuti zvirege kudzikatidza kunaka kwedandelion. Pfungwa yekutanga ndeyekusanganisa chikamu chembeu ne tsamba imwe neimwe izvo zvinoumba izwi. Mune ino kesi, zviri nani kana iri zita chairo.
Ndekupi kwekutora iyo dandelion tattoo
Kufanana nezvazvinoreva zvakasiyana, iyo dandelion inogona zvakare kuve protagonist yenzvimbo dzakasiyana dzemuviri wako. Iwe unongo fanirwa kuziva kuti inogona kuchinjika kune iwo aunonyanya kufarira.
Pamaoko: Kunyangwe zvingave zvisingaite senge, inogona kuve yakanaka tattoo kune iyo ruoko. Ehezve, mune ino kesi, zvinokurudzirwa kugadzira iyo mbesa pachayo, uye yakatwasuka, uye inongova mbeu shoma dzakatenderedza.
Mubendekete: Imwe yesarudzo dzakakurumbira ndeiyi, pasina kupokana. Bendekete chikamu chemuviri uko iyo dandelion tattoo inogona kuve iye mukubwinya kwayo kwese. Kupfuura chero chinhu nekuti chichava neyakaenzana chimiro, matinogona kurebesa mbeu uye osanganisa iwo pamwe nemavara kana mitsara yatataura.
Neck: Nharaunda yemutsipa inoyevedza uye yenyama zvakaenzana. Ndokusaka kana iwe uine tattoo yerudzi urwu mupfungwa, ichave inopfuura yakakwana. Saizi yayo iri kuzodzikiswa, asi kwete runako rwayo. Mativi emutsipa uye kumashure kwenzeve ivo vakasarudzwa zvakanyanya kuti vashongedzwe nedandelion.
Foot: Kana iwe usiri kutya kurwadziwa uko kunogona kuitika mumatato etsoka, enda mberi. Pasina kupokana, ndeimwe yeiyo nzvimbo dzinodiwa kuratidza dhizaini sezvizvi. Iyo lateral zone ichavewo zvakare ine iyo ine mukurumbira kune izvi.
Ankle: Matinji emaketeni anowanzo kuve nehungwaru. Asi mune ino kesi, isu tichaenda kusarudza dhizaini inoenda kushongedza nzvimbo yemakumbo uye ramba uchikwidza negumbo zvishoma. Tattoo yakatwasuka inoyevedza uye inogara yakakodzera.
Mbabvu: Zvevose varume nevakadzi, nyora pamabvu Ivo vanogara vachitipa kutangira kukuru, uyezve ivo vakanakira dhizaini hombe. Ehezve, kurwadziwa kunowoneka mune ino kesi kunouya mupfungwa. Asi kunyangwe zvakadaro, mhedzisiro yacho ichava yekutenda kwenyama zvakanyanya nekukombamira kwemuviri. Dandelion inobatana nehunhu hwekupedzisira uye runako.
Dandelion Tattoo Mutengo
Mitengo yeTattoo inogona kusiyanisa zvakati wandei kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, pamwe nerudzi rwe tattoo yatiri kutaura nezvayo. Mune ino kesi, kune zvekare musiyano muhukuru, zvinoenderana nenzvimbo yemuviri yatakasarudza. Tinogona kukuudza kuti mutengo wayo unogona kuenda kubva pamakumi masere euros kusvika kune anopfuura maeuro zana.
Mifananidzo yeDandelion Tattoos
Iko kunorwadza zvishoma kutora tattoo: tarisa idzi nzvimbo dzemuviri
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » MaTatoo eMaruva uye Zvirimwa » Dandelion nyora
Xenia valerko akadaro
Inonakidza kwazvo zvese! Asi iwe shandisa chirevo "ikozvino zvakanaka" kakawanda
Pindura Xenia Valerko
Warevesa Xenia, ndatovandudza posvo. Iyo tagline yandinayo panguva yekunyora uye dzimwe nguva inotamba zvinyengeri kwandiri seizvi 😛
Susana godoy akadaro
Mhoro, Luz !.
Muchiitiko ichi, iko kutungamira kwetatoo hakuchinje zvarinoreva, sekutonga. Sezvo zvirevo zvakavakirwa zvakanyanya pachiratidzo uye kubatana kwezvinhu zvacho uye kwete zvakanyanya marongero awo mukugadzirwa kwekupedzisira. Iyo nzvimbo yemuviri patinoitora ine kana zvishoma kana zvishoma zvemweya pamwe nehunhu hunhu, asi sekukuudza kwandinozviita iko pachako hakuratidze. 🙂
Ndatenda zvikuru nemhinduro yako.
Pindura Susana Godoy
Ndeupi kuboora kwakanyanya kunaka
Zvinorehwa nemaawa egirazi